ဆက်သွယ်ရန် - Rikoooo
107 လမ်း Gaillard ဆိပ်ကမ်း
သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့နေပါသလား ? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
သင့်ရဲ့အသုံးပြုသူအမည်မေ့နေပါသလား ? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
အထူးသတိပေးချက် ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်မီ, ငါတို့စစ်ဆေးပါ အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ ငါတို့သည်သင်တို့ပြီးသားသင့်ရဲ့မေးခွန်းကိုဖြေကြားခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုင်များနှင့်အတူနည်းပညာဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်ပတ်သက်။ ဘာသာရပ်များအတွက်ကျနော်တို့လုံးဝမှာပြန်ကြားချက်အာမခံပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အလုပ်အလွန်အကျွံမဟုတ်ကြသောအခါသင်၏တောင်းဆိုမှုများကိုဖြေဆိုရန်အတတျနိုငျဆုံး။ ကျွန်ုပ်တို့မှာဖိုင်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်လက်ခံထားပါတယ်၊ ငါတို့အားလုံးကိုထောက်ပံ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိရပါ။ အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကတော့စာရေးသူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဖို့ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည် webmaster@rikoooo.com သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုပူးတွဲဖိုင်များပို့ချင်လျှင်အထူးသဖြင့်။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှကျွန်ုပ်တို့နှင့်လည်းစကားပြောနိုင်သည် https://m.me/RikooooSimu
Rikoooo (optional) အသုံးပြုသူအမည်
ခိုင်လုံသောက e-mail လိပ်စာမဟုတ်ပါဘူး
အကြှနျုပျ၏အဖွဲ့ဝင်အကောင့်အကြှနျုပျ၏ဂျမ်ဘို subscription ကိုAn add-onအဆိုပါဖိုရမ်အခြား မှားနေသော Input ကို
သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကို၏ object: (*)
"ကို Message အကြောင်းအရာ" အတွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားပေးပါ။
နည်းပညာအထောက်အပံ့သို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ မည်သည့်အဖြေမှအာမခံချက်မရှိကြောင်းကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးလက်ခံခဲ့သည် add-ons
captcha (6 နံပါတ်များ)(*)
အားဖြည့် မှားနေသော Input ကို
ပုံမှာမြင်ရတဲ့နံပါတ် ၆ ခုကိုရေးပါ